Editor's Notes » Do & Don’t – Rules for Writers – Must Read!	294
မတူသောအတွေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်စာ ချရေးပါ
၁) – စာခိုးခံရသူတွေအတွက် ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဖက်က ဖြေရှင်းစာ ရေးပါမယ်။ Mandalay Gazette Website ကို Forum လိုသဘောထားမြင်ကြည့်ပါ။ Member ဖြစ်ပြီးရင် စာတင်ချင်တဲ့သူက စာတွေတင်ချင်သလိုတင်နိုင်တာပါ။ အဲဒီတင်တဲ့စာကို တင်သူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူနိုင်ရမှာပေါ့။ Admin, Editorsတို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သူများစာတွေမှန်းသိနိုင်မှာလည်း။ တက်လာတဲ့စာကို Editorက ဘယ်လိုလုပ်တာဝန်ယူနိုင်မှာလည်း၊ ယူအက်စ်မှာ ညအချိန်က မြန်မာပြည်မှာနေ့အချိန်မို့နာရီနဲ့မလပ်လည်း ကြည့်မနေနိုင်ပါ။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ကလူတိုင်း နေ့လည်မှာ ပုံမှန်ရုံးအလုပ်သွားပါတယ်။ MG Website အတွက်အချိန်ပြည့်ဘယ်သူမှ အလုပ်လုပ်မနေပါ။
etone says: သူများတွေပို့စ်တင်လို့ရယ် အီးတုံးတင်လို့မရပါလား ….။ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာတုန်း …။
kai says: အတင်းကာရောသာ တင်ပေတော့..
အယ်ရာတက်ပြီး .. မရဖူးထင်လို့..ကြည့်မိရင်.. ပို့စ်ကရောက်နေရော..
ဆာဗာနတ်က .. ငွေလိုချင်လို့လှည့်စားနေတယ်ထင်တယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: မသိလို့ ဒါလေးနည်းနည်းလောက် မေးပါရစေသဂျီးရေ…. ၂ရက်လောက် ပြန်ရေးသင့် မရေးသင့် စဉ်းစားနေတာ။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ Amazon EC2 ဆာဗာကိုပြောင်းကြည်ပါ့မယ်..။
ပို့စ်က ဘယ်လိုဖြစ်သလည်းတော့ မသိ… တချို့ တင်လို့ရ..တချို့ မရဖြစ်နေတာပဲ..။
တင်လို့ရချိန်မှာ အတင်းတင်တော့ အဲလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ထင်တာပါပဲ..။
အဲဒါ မနောဖြူကိုလည်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်..။
တရက် ..တပုဒ်လောက်..လွန်ရော..၂ပုဒ်လောက်တင်ပါလို့ပါ..။ မတူသောအတွေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်စာ ချရေးစေလိုပါတယ်..။
သဂျီးရဲ့ဒီကော့မန့်ကို ဖတ်တော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ ပိုစ့်ကို တစ်နေ့ တစ်ခု ၂ခုလောက်တင်ဆို မနောဘက် အခြေအနေကိုမတင်ပြတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒေတာဘေ့အယ်တာကြောင့် ဆိုက်က ပိုစ့်တင်လို့မရတာလား……. မနော တင်နေလို့ မန်ဘာများ ပိုစ့်တင်လို့မရတာလားဆိုတာ နည်းနည်းလေး နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေသလို ကိုယ်ပိုင်မူချရေးပါဆိုတာလည်း မနောက ဘာ ကော်ပီတွေများနေလို့လဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်သုံးသပ်မိတယ်။ ၈၀ အရမ်းလိုချင်နေလို့များ နက်ဖိုး ၄၀၀ ၅၀၀ အကုန်ခံပြီးလုပ်နေသလား။ သူများကို သိတာလေး ဝေမျှနေတာလားလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်သုံးသပ်နေပါတယ်။ မနောကြောင့် ဒီပြင်သူတွေ တင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ စာသားကြောင့်ဆိုရင်တော့ မနော ဆက်လက်မရေးသားတော့ပါဘူး။ ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေ ငွေတွေ အချိန်မရပဲ သံယောဇဉ်ကြောင့်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေ ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်။
kai says: အမ်..။
အခုလိုတင်နေတဲ့ပုံစံက .. ဆာဗာကဒေတာဗေ့စ် ရီဆို့စ်အပြည့်နီးပါးယူသုံးတာပါ..။အဲဒါကို တောက်လျှောက် ၃-၄ခုဆက်တင်ပြီးရင်.. ရီထရိမလုပ်မချင်း… တခြားသူတွေအတွက် .. ၁-၂နာရီလောက်ဘာမှလုပ်မရပါဘူး.။
ဒီတော့ .. ဆိုက်မျက်နှာစာဟာ ..မနောပို့စ်တွေနဲ့ချည်းရပ်နေခဲ့တာ တွေ့ရမှာပေါ့..။
အဲဒီလိုဆိုတော့ ..ပိုစ့်တင်ရင်..အင်တာနယ်ဆာဗာအယ်ရာတက်နေတာက ..သပ်သပ်ဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒါက .. မြန်မာစာလုံး(ဇော်ဂျီ)နဲ့ php,php-cgi ပြသနာပါပဲ..။
မန္တလေးဂေဇက်ဟာ ..မြန်မာကွန်မြူနတီကို အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်ပဲ.. ထောက်ပံ့အားပေးနေတာသာဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒီအတိုင်း ရွာသားတွေလည်း ..သဘောထားကြတယ်လို့ .. ထင်ပါတယ်..။
bigcat says: ချိတ်ချိုးပါနဲ့ ဂျီးတော်ဖြူရယ်။ သဂျီးက ဘီယာတိုက်မွေးထားတဲ့ ကိုဘေးအမဲသားစတိတ်စားပြီး ရီတီတီလေးဖြစ်တုန်း ကီးဘုတ်နှိပ်လိုက်မိလို့ပါ။ သဂျီးမင်းကလည်း နောင်အပြောအဆို (အပြောအဆိုထက် အစားအသောက်ကို) ဆင်ခြင်ပါ။ စာဆိုရှိတယ်လေ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1086
R Ga says: သူကြီးရေ…. Group က ပိုစ်တွေ ပျောက်နေတယ်နော် …။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။….။ တော်ကြာ သူများတွေက ကျွန်တော် ဖျက်ထားတယ်ထင်နေဦးမယ်…။
zawana says: ဟုတ်တယ်ဗျ … Group က ပို့စ်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲ မသိဘူး …. အမြဲစိမ်းတွေများ ဝင်ဖျက်သွားတာလား …
etone says: ပို့စ်တင်တာ အယ်ယာတက်တော့ tab တစ်ခုနဲ့ homepage ကိုသွားတော့လည်း ကိုယ့်ပို့စ်က ပေါ်မှမပေါ်သေးတာ.. ဒီတော့ reload … reload… reload ဆယ်ကြိမ်လုံးလည်း အယ်ယာပဲပေါ်တယ်… မရတဲ့အဆုံး သိတယ်မို့လား သူကြီးကိုပဲ အပူကပ်ရတာပေါ့ :D
char too lan says: သဂျီးဗျိူ့သဂျီး ကျနော်လဲ ဟိုဟာဖြစ်တယ် ဒီဟာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါ တေချာလေးစစ်ပေပါဂျာ :P
အဲ့ဒါ တေချာလေးစစ်ပေးပါဂျာ :P
ဆူး says: ချာချာ ရေ… ဟိုဟာ ဖြစ် ဒီဟာ ဖြစ်ရင် လမ်းထိပ်မှာ ဆေးခန်း ရှိတယ် ကျန်းမာရေး သွားစစ်လိုက်ပါလား။ ကျန်းမာ သန်စွမ်းရင် ဟိုဟာ ဖြစ် ဒီဟာ ဖြစ် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ အားလုံး ကောင်းသွားမယ်။ ကျန်းမာရေး စရိတ်လိုချင်ရင်တော့ ဖောင်တင်ပေါ့။ တင်ထားတဲ့ ဖောင်တွေ များနေရင် ဖောင်ပြင် ပြီး ပြန်တင်ပေါ့။
ချာတူးလန် ဖောင်ပြင်မှ သဂျီးက ပေးမယ်တဲ့နော်.. ကြားဖတ် သတင်းတခုကနေ ကြားမိတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1084
nigimi77 says: ဒါပေါ့ဗျာ အများနဲ့ တစ်ယောက် ကျုပ်လွန်တာပေါ့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 335
အာဖျံ ကွီး says: အဲဗျာ .. ကိုယ့်လူအလွန်ဖြစ်သွားတာတော့ ကျုပ်လဲစိတ်မကောင်းဘူး။ thinking way ကတော့akind of literal thinking ပဲ။ ဒါပေမဲ့ negative sign ပြနေတာကခက်တရ်။ အဟတ် အဟတ် :D :D :D
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: လွန်ဒယ် မလွန်ဘူးဒေါ့ တိဝူး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေမေစုလို့ ခေါ် သို့ မဟုတ် တီတီစု လို့ ခေါ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဖေဖေလို့ ခေါ်
အဖွားဂျီးဆိုပြီးတွားမလုပ်နဲ့တိချင်ရင်ချမ်းကြည့် ဆဲရင် ပြုတ်မယ်ဆိုဘဲ
ဘယ်ကောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသဲရှိတယ်လို့ ထင်လဲ
မင်းတို့ ကိုအလေးပြုချင်လို့ ပါ
nigimi77 says: အပေါ်က ဆရာ ဘာတွေရေးထားတာလဲ။ ညဏ်မမှီလို့တစ်ဆိပ်လောက်။
ဆူး says: တစ်ဆိပ်ဆိုတာ တစ်အိပ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ တွေးတတ်သလိုသာ တွေးပါ။ ရှင်းပြရင် ရာဇ၀င်ချီလို့ သမိုင်းလှန်နေရမယ်။ တော်ကြာ ဆရာတော် အောင်ပု ရှုပ်တာ လူတွေ သိကုန်မယ်။
အာဖျံ ကွီး says: လှုကြပါခင်ဗျ၊ လှူကြပါ။
လှူတဲ့ငွေ မြန်မာပြည်ထဲအကုန်ရောက်ပါမယ်..။ ဆိုတာ …
ဘယ်ကိုရောက်မရ်ဆိုတာ အတိအကျသိလို.ရမလား … သဂျီး။
bigcat says: ကြွက်မခုတ်သောကြောင်များ ကြက်ကင် ဝက်ကင် ဘဲကင် (လူကင်လည်းပါနိုင်သပေါ့) စားဖို့လှူဒါန်းခြင်းပေါ့ကွယ်။
bigcat says: ရွာသားအပေါင်းရေ သဂျီးက ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကွန်းမန့်တွေကို အနုတ်ပေးခံရတာများရင် ဖျက်ပစ်မယ်တယ်။ အဲဒါ ဝိုင်းဆွမ်းကြီးလောင်းဖို့ ဖိတ်မန္တကပြုလိုက်ပါတယ်။
R Ga says: အင်း အလိမ္မာ စာမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားက ဒီနေ့ အင်တာနတ်ခေတ်ကြီးထဲ ပျောက်ကွယ်သွားပြီလားတောင်မ သိ ပါဘူး ဦးကြောင်ကြီးရေ..။
char too lan says: ဟုတ်ကဲ့ သဂျီး လှူရင်ဘာအတွက် ဘယ်ကိုရောက်မလဲ ကျနော်လဲသိချင်တယ် ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ဆိတ်လောက်ရှင်းပြပေးပါလား
bigcat says: လှူရင်ဒါနအတွက် နတ်ပြည်ရောက်မယ်လေ ချာတူးရဲ့။ ဘာသာရေးအသိအမြင် ဒီလောက်တောင် ခေါင်းပါးရသလားကွဲ့။
ဆူး says: အနုတ်က ပေးချင်တိုင်း ပေးလို့ရဘူး။ ကွန်နက်ရှင် လိုင်းတူက တယောက် ပေးပြီးရင် ထပ်ပေးလို့ မရဘူး။ ဒီတော့ ဆန္ဒ အမှန် ဖော်ထုတ်ပေးလို့ မရပါ။
nigimi77 says: ၆၂ သန်းကိုတောင် လက်တဆုပ်က Control လုပ်တာကိုတောင် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ဖြေသိမ့်နေကြသေးတာပဲ အမှား ၁၀၀ အမှန် ၁ယောက် က ဘာလို့ မကျေနပ်နိုင်ရမှလဲ။ ကျေနပ်သဗျား။ ဖော်ပင်လို့ခင်ဗျားဖော်ပင်နေတယ်လို့ ပြောရင် ကျေးဇူးမတင် ပါးရိုက်တတ်တာ လူ့ သဘာဝပဲ။ ကျုပ်လွန်သဗျ။ ဟီး ဟီး……။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဘယ်လိုမှသဘောမထားပါနဲ့ ဘော်ဘော်ကြီးရယ်
မာန်မာနတွေနဲ့ ဒေါသအဖြစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲလိုက်ကြတော့ကာ
မှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဖြစ်မြောက်စေဘို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူတော့ဘူးလေ
ယနေ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးအကြီးကြီးဦးသန်းရွှေကို အမုန်းတရားတွေနဲ့ သာစွတ်ပြီး
ချီးဘရိန်းတို့ အာဏာရူးတို့စောက်သုံးမကျဘူး တို့ဆိုပြီး အလိုမတူတိုင်း စွတ်အော်နေကြတာဘဲရှိတယ်
သူအရည်ခြင်းရှိလို့နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုင်တွယ်ဖိနှိပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကို
ကျုပ်တို့ မဖြစ်မနေ လက်ကို ခံရလိမ့်မယ်
အဲ့လိုလက်ခံလိုက်လို့ ကျုပ်တို့ က သူ့ ရဲ့ လက်ပါးစေဖြစ်သွားမှာမှ မဟုတ်တာ
ရန်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖက်လူကို ပြတ်ပြတ်သားသား အမှန်တိုင်းမှတ်ချက်ချပေးနိုင်ရမယ်
ဒါမှ အဖြေကိုသိမယ် လုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်မယ် ဒီလိုလာမှာ
သူ့ အာဏာတည်ရေးတွက် မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးကို သူများလက်ထဲထိုးကြွေးတာတွေ
မြန်မာ့သယံစာတစွမ်းအင်ကြောင့် ကျုပ်တို့ နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံခြားစွတ်ဖက်မှုနဲ့ 
ဒီမိုကရေစီရရှိဘို့ ဆိုတာ သိပ်မမြင်တော့ဘူး ( ကိုယ့်အမြင်)
ရုတ်တရက်ကြီး သူနိုင်သွားပါတယ်လုပ်ရင် အသံတွေဆူသွားမှာသိလို့အချိန်ဆွဲလိုက်တယ်
သူနိုင်တဲ့အတွက် သူလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြလိုက်တဲ့အခါ
ကျုပ်တို့ အားလုံးက အော်တိုမက်တစ် သူ့ ကို အနိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုရောက်သွားပါလေရော
သူက ဘာဖြစ်လို့ ဒီဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခွင့်ရှိတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို လုံးဝမကြားရဘူး
ဒီရွေးကောင်ပွဲကို ကျုပ်တို့ လက္ခံလိုက်ပြီလား
ဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက မရှိဘဲနဲ့ 
စစ်ထဲဝင်ရင်ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် ပြောဆိုငြင်းခုန်တာတွေဘဲရှိတယ်
ဒီသတင်းရဲ့ဒီအက်၇ှင်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် စို့ စ်ကို မတွက်ကြည့်ကြတာလား
nigimi77 says: ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လမ်းကြောင်းကို တွေးမိပါတယ်။ ဦးဏှောက်တော့ကောင်းတယ်။ ဦးဏှောက်တွေကို (Master Brain) တွေကို ၀ယ်ယူထားတာကြောင့်။
Gipsy says: ကြိုဆိုပါတယ်….အကိုကြီး nigimi77 က အသုံးအနှုံး လေးတွေ အိစက် ညက်ညောပျော့ပြောင်း တမျိုးတော့
narziparty2009 says: အစ်ကိုတို.ေ၇ကျွန်တော်ပို.စ်တင်တိုင်းတစ်ခြားလူတွေကွန်မန်.ပေးလို.ရအောင်လုပ်လို.မရဘူးဖြစ်နေပါ
kai says: http://mandalaygazette.com/rules-for-writers
ကိုယ့်စာကိုယ် တည်းဖြတ်( Edit)လုပ်လို့ရပါတယ်။ အခုစာတွေ အတန်းကြီးဖြစ်နေတာကို စပေ့ထည့်ပေးပါ။ Edit လုပ်နေတဲ့ ..Post အောက်ဆုံးသွားကြည့်ပြီး Comment Off Check Mark ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။
bigcat says: Acer Aspire 15.6″ Intel i5-480M Notebook Laptop for $551 Shipped
ဆူး says: တော့တန်း စာရင်းဝင်များနဲ့ စာရင်းဝင်ဟောင်းများ နာမည်ကို စာရင်းပြုစုပြီး ပိုစ်တခု တင်ပေးပါလား။ သင်တန်းတက်ရင် အောင်လက်မှတ်ပေးသလိုမျိုးပေါ့.. တော့တန်း စာရင်းဝင်ဘူးသူတွေ နာမည်လည်း ဖော်ပြပေးတော့ အားလုံး သိရတာပေါ့။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ရွာကို ချစ်လဲ ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် သိစေတာပေါ့။ ဖြစ်နိင်ရင် လုပ်ပေးနော်။ သဂျီး.. ဒိုးနပ်မုန့် အခု ဖုတ်ထားလို့.. ကျက်ရင် ကျွှေးမယ်နော်။ ဟီးဟီး. စိတ်ကူး ပြောကြည့်တာ အဆင်ပြေ မှ လုပ်ပါ။
manawphyulay says: ဒါဆို ဆူးရေ ဆိုက်စတင်တည်ထောင်ထဲက စာရင်းတွေကို ဖော်ပြပေးရမှာပေါ့နော်….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 20
ဒီကမ္ဘာမြေပေါ် သစ္စာတရား လွှမ်းခြုံနိုင်ပါစေ says: ဟုတ်တယ်မမ ဆူး ပြောသလိုပဲ
သစ္စာလည်းtop ten ဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေကိုသိချင်ပါတယ်။history နဲ့ကျောင်းပြီးလို့လားတော့မသိဘူး၊ဘယ်သူတွေtop ten ဝင်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့historyကိုသိချင်စိတ်ပြင်းပြနေပါတယ်။
bigcat says: နိုးနိုး.. top100 လောက်လုပ်ပေးပါသဂျီး။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော့နာမည်ပါတဲ့အထိပေါ့။
ဆူး says: သဂျီး ဆိုက်က ကျန်းမာရေး မကောင်း ဖြစ်ချင် ပြန်ပြီလား မသိဘူး။
ဆန့်ကင် ဆန့်ကင် ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ပြီး ဒီမှာ လာပြောသွားသည်။
kai says: ကြည့်ရတာ .. အန်ဒါအတက်ခ်ဖြစ်နေပုံရတယ်…။
ဘန်းဝပ်တွေတက်နေတာအရမ်းပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 21
k-kay says: Donate ကို နှိပ်လိုက်ရင်..ဘယ်ထဲရောက်သွားသလဲရှင့်။
kopauk mandalay says: စမ်းနှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် သူများမေးတာထက်ပိုတိတိကျကျသိမယ်လေ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1027
intro says: သူကြီးရေ… ဒီနေ့အချိန်ထိ ပွိုင့် တစ်သိန်းပြည့်တာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ ဗျို့
kai says: မပြောဘူး..။ သတ်ချင်သတ်လိုက်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8419
ဆူး says: သဂျီးက အဝေးကနေ ပြုံးပြ မဲ့ပြ လုပ်ပြီး သတ်လိုက်တဲ့.. သိချင်လို့ မေးတာ ကြောလည်း ကြောဝူး။
k-kay says: thx..ko pauk. I’m going to do.
k-kay says: I can see that one only “CubePoints – Donate”
char too lan says: You can see previous 5. check it !!